Expert Semalta amin'ny famoahana ny tsipika avy amin'ny Google Analytics
Ireo mpampiasa Google Analytics dia mbola manohy ny ady amin'ny fisian'ny hosoka an-tserasera. Ny fanitsiana rehetra tsotsotra rehetra dia tokony havotsotra haingana ao amin'ny kaonty Google Analytics. Ireo spam referins dia manana fiantraikany amin'ny angon-drakitra ao amin'ny kaonty GA ary, amin'ny toe-javatra ratsy indrindra dia manimba ny lazan'ny tranonkala iray.
Mikasika ity raharaha ity, i Nik Chaykovskiy, Tale Mpitarika Success Success of Semalt , dia manasongadina ny fomba fanesorana ny fitsabahana amin'ny spam ao amin'ny Google Analytics.
Manao ahoana ny tsy fahampian-tsakafo?
Voalohany indrindra, ny adihevitra momba ny SPA dia mamela ny data GA. Ny orinasa lehibe izay mahazo fitsidihana an'arivony isan'andro dia mety tsy hahamarika ireo fiovàna goavana niainan'ireo orinasa madinika nateraky ny spam referral. Amin'ny ankapobeny, ny referanso ghost dia manana taham-pifandraisana 100% ary fotoana kely ao amin'ny tranonkala. Noho izany, raha zara raha mihabetsaka ny tompon-tranonkala iray, dia mety hampiato ny tatitra Google Analytics ny tahirin-kevitra sandoka.
Faharoa, ny ankamaroan'ny fitsangatsanganana ghost dia miezaka handefa ny fifamoivoizana amin'ny tranonkalan'ny spam mba hanatsarana ny fialan-tsasatra SEO. Amin'ny ankapobeny, ireo tranonkala mampikorontana ireo dia mamerina mitsidika mpitsidika marobe, tranonkala misy malware na tranokala e-commerce ahiahiana. Ireo mpampiasa aterineto dia tokony hisoroka ny fidirana amin'ny URLs.
Farany, ireo tranonkala ghost dia mety amin'ny tranga faratampony, hamorona tranonkala ho toy ny spam referérer. Ny mpampihomehy iray maniry handefa mivantana ny fifamoivoizana dia afaka manao izany amin'ny fanovana tsotra fotsiny ny anaran'ny URL-n'ny spam, anisan'izany ny an'ilay niharam-boina satria tsy mety azo anarina anarana ara-pitsarana.
Misy sokajy roa momba ny fitsangatsanganana ara-maimaim-poana ara-panahy sy tsy ara-tsaina. Ny lahatsoratra dia manasongadina ny fahasamihafany sy ny fomba hamonoana azy ireo.
Ny famindrana anarana amin'ny anaran'ny ghost
Ny fitsangatsanganana ara-panahy dia mitranga amin'ny toe-javatra izay tsy hitan'ny scammer na oviana na oviana ny tranonkala fa manahiran-doha ny hevitry ny GA. Raha atao izany, dia alefaso mivantana amin'ny GA ny fampahalalam-baovao. Ireo tompona tranonkala dia takiana amin'ny fampiasana ny tendron-tsambikavok'i Vertical amin'ny alàlan'ny fanesorana ny fitsaboana ghost.
Ny antony voalohany dia tokony hisy ny fomba fijery vaovao momba ny GA. Amin'ny dingana avoakany, dia tanterahina ao amin'ny fizarana admin. Ny fanavaozana ara-pitsikana dia voasivana amin'ny famelana mpamorona tokana manan-kery mba handalinana sivana. Ny anaran'ny tompony manan-kery dia miankina amin'ny iray amin'ny tompon'ny tranonkala iray, toy ny URL's.
Mikaroka ny fizotry ny mpihaino GA, eo amin'ny sehatra goavam-be, tsindrio ny Technology, ary avy eo ny Network mba hametraka ny anaran'ny mpampiasa. Ny anaran'ny mpampiantrano dia azo alaina amin'ny fametrahana ny angon-drakitra ho an'ny taona iray ary ny famerenana ny isa voalohany amin'ny anaran'ny mpampiantrano.
Alohan'ny alàlan'ny filtration, ny mpampiasa dia tokony mamorona sehatra iray mba handinihana izany amin'ny antontam-baovao. Na izany aza, ny fomba fijerin'ny sivana dia manomboka mamorona angon-drakitra aorian'ny fampiharana sivana. Tsy afaka hanova tanteraka ny antontan-kevitra ara-tantara izy io. Izany dia manazava ny maha-zava-dehibe ny fizahana sivana.
Fanesorana spam tsy fantatra
Ny sari-panavaozana tsy-ghost dia bots amin'ny fitsidihana tranonkala iray. Ankoatra izany, ireo spam referans dia tsy azo esorina amin'ny fomba filtration etsy ambony. Raha te hamafa spam tsy misy domoka ianao, dia tsy maintsy noforonina ny sivana hafa.
Mba hahafantarana ireo fizarana izay tokony ho voasakana ny fakana an-tsoratra, dia alefaso amin'ny Acquisition amin'ny Google Analytics. Fidio daholo ny fifamoivoizana ary avy eo ny referrals. Ny toetry ny faharoa dia tokony hovaina amin'ny "anarana nomena". Hatsangana izany fa misy ny anaran'ny mpampiantrano marina. Ny tompon'ny tranokala dia tokony hanohy hanamarina ny GA azy ireo tsy tapaka ho an'ny fitsangatsanganana ara-pitsaboana vaovao satria ny bots vaovao dia mipoitra isaky ny mandeha Source .